5/1/12 - 6/1/12 ~ हाम्रो कलम
Wednesday, May 30, 2012 हाम्रो कलम 1 comment
विभिन्न ठाउँ पुग्दा थरीथरीका दृश्यले मनै लोभ्याउँछन् । तर जतिसुकै सभ्यताको चुचुरोमा पुगे पनि प्रकृतिको काख ओछ्याएर बस्ने गाउँ-घरले जस्तो अरु कुनै पनि कुराले मोहनी लगाउँदैनन् । त्यसमा पनि आफ्नो गाउँको मोह नै अलग हुन्छ । गोरखा जिल्लाको मेरो गाउँ तान्द्राङमा खिचेका केही तस्वीरहरु त्यही गाउँले मोहनीको झल्को दिन यहाँ राख्‍न चाहेँ ।
All Photos © Prabin Banjara
Wednesday, May 30, 2012 हाम्रो कलम No comments
।। जोतारे धाइबा ।।
कविता, गीत जस्ता लघु आयामका विधामा कलम चलाउने स्रष्टा गीता त्रिपाठीले पछिल्लो समयमा आफूलाई द्रष्टा परिवेशमा फैलाएकी छन् । समालोचनाको बृहत् आयाममा फैलिने क्रममा उनको दोस्रो समालोचना संग्रह कृति विश्लेषण : प्रायोगिक आयाम आएको छ । कृति तथा रचनालाई समग्रतामा सर्सर्ति केलाउने परम्परा विपरीत यस संग्रहका समालोचनामा छुट्टै शैली अपनाइएको छ । विधागत रूपमा एउटा निश्‍चित ढाँचाभित्र कृतिको चर्चा गर्ने परिपाटीसामु फरक-फरक कोणबाट कृतिलाई केलाउने समालोचकीय शैली नवीन लाग्छ, जुन यो कृतिको वैशिष्ट्य नै हो । आफू प्राध्यापन क्षेत्रमा रहे पनि त्रिपाठीले संग्रहमा प्राध्यापकीय समालोचनाको भद्दा छिटा पर्न दिएकी छैनन् । जडसूत्रवादी नभई अनुसन्धानमूलक र फरक कोणयुक्त दृष्टिबाट कृति हेरिएकोले तिनमा अलग सोचको द्वार खुलेको पाइन्छ ।
काव्य, कथा, निबन्ध, समालोचना र उपन्यास विधामा केन्द्रित १२ वटा समालोचना छन् संग्रहमा । कृति र विषयको चयन हेर्दा पनि समालोचकले नयाँ सोच प्रस्तुत गर्ने चुनौती आत्मसात् गरेको देखिन्छ । समालोचना आलेखमा पूर्वीय र पाश्चात्य दुवै समालोचना पद्धति अपनाइएको छ ।
आयामको हिसाबले संग्रहभित्रकै सबैभन्दा लामो समालोचना समकालीन नेपाली नारीकथामा वैचारिकता रहेको छ । समकालीन शब्दको परिभाषासहित वैचारिकताका अनेक हाँगाबारे चर्चा गरिएको आलेख निकै जानकारीमूलक छ । पारिजातलाई नेपाली नारीकथामा वैचारिकताको उठान गर्ने श्रेय दिइए पनि उनको कथाका सन्दर्भबारे भने आलेख मौन छ । समकालीन सन्दर्भको नारी कथाकारिताको बयानमै विस्तारित आलेखमा व्यक्ति, समाज, राष्ट्रिय राजनीति, परिवर्तन, सशस्त्र द्वन्द्वसँग जोडिएको चेतनादेखि नारी समलिंगीय चेतना सम्मको आधुनिक आयामको चर्चा छ । उत्तरआधुनिक चेतनाअन्तर्गत महानगरीय सभ्यता र रुग्ण मानवीय संवेदना र डायस्पोराको आकार लिँदो अन्तर्देशीय समाजको अस्तित्त्वलाई पनि मान्यता दिइएको छ । कथाहरूबारे उदाहरणसहितको विश्‍लेषणले आलेखलाई थप जीवन्त र प्रभावकारी बनाएको छ । सारमा वैचारिकताको परिभाषा राजनीतिक चेतना मात्रै नभई जीवन-जगत्‌बारेको चिन्तनका तहमा अन्तर्वस्तु बनेर विचार रहने भनेर समग्र विचारपुञ्जलाई बुझाइनु पनि चित्तबुझ्दो लाग्छ । कथा चर्चामा पनि त्यही अन्तर्वस्तुलाई नै मियो बनाइएको छ । यसबाट जतिसुकै शीर्षक-उपशीर्षकमा नेपाली नारीकथाको वैचारिक पाटोलाई केलाइए पनि तिनमा परम्परागत ढाँचाअनुसारकै नारी-पुरुष सम्बन्ध, पारिवारिक-सामाजिक टकराव र लैंगिक समस्याको वृत्तदेखि बाहिरको बहुआयामिक पक्ष आउन सकेका छैनन् भन्नेमा समालोचकको समेत स्वीकारोक्ति देखिन्छ ।
निबन्धकार शंकर लामिछानेका निबन्ध रचनाबारे दुई थान समालोचना छन् । सूत्रात्मक लेखन, चेतनप्रवाह पद्धति अपनाउने लामिछानेको निबन्धसंग्रह एब्सट्र्याक्ट चिन्तन प्याजबारे समालोचक त्रिपाठीको विश्लेषण सार्थक छ । एकथरी पाठकको लागि 'खै, बुझिँदैन' को लेवलमा अलग्गै बसेका लामिछानेको मदन पुरस्कार विजेता कृतिभित्रका निबन्धहरूबारे एक-एक गरेर संक्षिप्त वर्णन गरिएको छ । त्यति आंशिक चर्चाले पनि त्यस्ता पाठकको लागि दुरुहताको ग्यास च्याम्बरभित्र आँखीझ्यालको काम गर्न सक्छ । लामिछानेकै अर्को निबन्धकृति गोधूलि संसारको निबन्ध जीवनः एक प्राध्यापकमा ध्वनिविधानको पाटो पनि समेटिएको छ संग्रहमा । त्यसमा ध्वनि सिद्धान्तको सरल परिचयका साथै शब्द, वाक्यांश र वाक्यको वाच्यार्थ र व्यङ्यार्थबीचको भेदको चर्चा जानकारीमूलक रहेको छ ।
इन्द्रबहादुर राईको समालोचना र कथाको फरक-फरक समालोचनामा त्रिपाठीले मिहिनेत गरेकी छन् । गहन अध्ययनविना यति गहिराइको हेराइ सम्भव हुन्न पनि । विजय मल्लको उपन्यास अनुराधाबारे राईको समालोचनाबारे त्रिपाठीको आकलन र चित्रण कता-कता सर्सति मात्र बन्न पुगेको भने देखिन्छ । धारिलो विश्‍लेषणबाट नयाँ कोण दिनुपर्नेमा सम्बन्धित रचना तथा पाठको कथानककै सिलसिला र अवस्था झल्काउनमा उनी अल्झिएकी पनि छन् । यसैगरी केही समालोचना आलेखमा उनले शास्त्रीय समालोचनाको रेखी कोर्ने बानी छुटाउन सकेकी छैनन् । तिनमा जीवनीपरक समालोचनाको छाया देखिन्छ । राजेन्द्र भण्डारी, मनु मञ्जिल, सुधा त्रिपाठी, पद्मावती सिंहका सिर्जना-कृतिको समालोचनामा पस्ने क्रममा पाठकलाई झर्को लाग्न सक्छ । नसमेट्दा तथा जोड नदिंदा पनि हुने कुरालाई प्राथमिकता दिँदा समालोचनाको सुरुवाती हरफ जानकारीका स्रोत होइनन्, अल्झाउने छेस्काछेस्की बन्ने खतरा देखिन्छ । सुधा त्रिपाठीको निबन्धको संरचनागत स्वरूप केलाउँदा सुधाको न्वारानको नामदेखि लेखनारम्भ, पहिलो प्रकाशित रचना, पारिवारिक जरासम्मका जोखाना हेर्नुको महत्ता के रहन्छ ?
समग्रमा, समालोचनामा अलग रूपमा निश्चित एउटा कोण खिचेर कृतिलाई हेर्ने र पाठकले पनि विशिष्टीकृत ढाँचाबाट कृति बुझ्ने हिसाबमा गीताको यो पुस्तक उपयोगी छ । शास्त्रीय तथा प्राध्यापकीय समालोचना निरुत्साहित गर्न प्राध्यापन पेशामै रहेर पनि नयाँ गोरेटो विकास गरिरहेका गीताहरूको प्रयास स्वागतयोग्य छ ।
कृति कृति विश्‍लेषणमा प्रायोगिक आयाम
कृतिकार : गीता त्रिपाठी
संस्करण : पहिलो, २०६७
पृष्ठ : १६७
समय र नीलो प्रेम
Tuesday, May 29, 2012 हाम्रो कलम No comments
।। शिव ज्ञवाली ।।
भर्खरै फेसबुकको स्टाटसमा एउटा म्यासेज अपलोड गरेँ ।
मुड त्यति फ्रेस छैन । गर्मीले शरीर लस्त छ । झ्यालबाट सुटुक्क छिरेको चिसो हावाको स्पर्शले ओइलाएको जाँगर फक्रिन्छ । यो समय म प्रायः च्याटिङ र फेसबुकमा बिताउँछु ।
एउटा मासिक पत्रिकको कनीकुथी सम्पादक । पलङमुनि गोल्डस्टारका तीन जोर नयाँ, पुराना जुत्ता । गाउँबाट आमाले पठाइदिएको गुन्द्रक र मस्यौराका पोकाहरू । टेवलमा ल्यापटप छ, विदेशी मित्रले उपहार दिएको । सडकमा कुकुरहरूलाई कार्तिक लाएको छ । पर....मोटरको आवाज केही मन्द हुँदै जाँदैछ ।
रातको साढे एघार बजिसकेको छ । सिरानीमा मोबाइल लडिरहेछ । म यो कोठामा विगतका केही वर्ष अघिदेखि एक्लै छु । कहिलेकाँही पाहुना पनि थपिन्छन् । यो समयसँग मेरा धेरै सुरुवातहरू जोडिएका छन् । सायद मैले पहिलो पटक एक पफ गाँजा तानेको समय, यस्तै लेख्नै नपर्ने अरू पनि । केही अनौठो, केही नयाँपन र गर्वको अनुभूति संगालेको त्यो क्षण । केही घुर्मैलो सम्झनामा आइरहन्छ ।
बाहुन गाउँमा रातिको राम हेर्न जानलाई अनुमति थिएन । त्यो रात मगर गाउँको साँल्दाइको कड्कुरोमा बितेको थियो । उद्देश्य गाउनुभन्दा बढी तरुनी जिस्काउनुमा थियो । तरुनीहरूको भीडमा पछ्यौरा ओढेर बसिदिन्थे । उमेरले भर्खर सोह्र काट्दै गर्दाको रुमानी मौसम । बतासले पात हल्लाउँदा पनि त हाँसो उठ्छ ?
‘ओए बाउन ! टिमी आम्छौ ?’
स्कुलबाट फर्कदैं गर्दा बाटोमा झुपीले सोधी ।
रातामाटे माल्दाइकी छोरी, उमेरले दमाली नै हो । बाटोमै घर छ । ऊ स्कुल जान्थिन । उचाइ पनि लगभग मेरो चिउँडोसम्म आउँथी । राताराता गाला र पोटिलो शरीर । नेप्टो नाक, वक्षस्थलले चुन्नी अलिक माथि उठ्न थालेको, वसन्तको पहाड जस्तै । म सम्झिन्छु उसलाई । हिजोजस्तै लाग्छ तर पाँच दशक नाघिसकेछ ।
‘कहाँ आउने भनेको ?’
‘साँल्दाइकोमा झाम्रे छ, ठा’पा छैनौ ?’
‘के खान हो भन्चु ?’
‘एक थोक देम्ला नि !’
‘पक्कै दिन्छेउ ?’
‘सुपाले टाँस्नी नदे’त । उसले चुनौती दिँदै भनी, ‘देन सक्ने कि खान सक्ने ?’
‘अहिले नै देउ नत ।’ मैले पनि निर्धक्कसँग मागें किनकि घरमा ऊ एक्लै थिई ।
‘अहिले जो खरोभ’भा बेनको जाँड घलामेर खाउ केरे ।’ उसले मैले सोचेभन्दा फरक प्रस्ताव गरी । उसको नजिकै गएर हात समाएँ ।
‘म त आउँदिन ।’ मैले भाउ खोजें ।
‘केलाई नआम्न परो ? साँझ देम्ला के एक थोक ।’ उसले लुकाएर राखेको एक थोक साँझदिने बाचा गरी ।
सुटुक्क घरभित्र छिरेर एक मग सुइक्याएँ । कसैले थाहा पाउँदैनन् भन्ने पक्का थियो । उसले पनि अलिकति खाई, मलाई पनि खुवाइदिई । निकै राम्री थि मोरी । हाँस्दा गालामा डिम्पल स्पस्ट देखिन्थ्यो ।
‘म जान्छु अब’ मैले भने ।
‘साँझ आउहै बाउन’, उसले भनी । हिड्ने बेला गम्लङ्ग अङगालोमा बेरेर चुप्प म्वाइ खान पनि भ्याई । म पनि के कम उसलाई साथ दिएँ । र, झाम्रेको प्रस्ताब स्वीकारी दिएँ । ‘बाटोमा राम्रोसित जाउहै, फेरि मन्टेउला, ‘केही तल पुग्दासम्म उसले सम्झाउँदै थिई । यता मलाई भने घरबाट कसरी निस्कने भन्ने समस्या थियोे । थाहा पाए फलानो फलानिसित सल्किएछ । पँधेरालाई मसला हुने ।
घरका सबै सुतिसकें । बार्दलीबाट मलखातोमा फालहालेर पुगें झाम्रेमा । साँल्दाइको आँगनमा झाम्रे, दोहोरी र चुड्काको मारामार थियो । दोहोरीमा युवायुवतीहरू छेंड हान्दै थिए । पर सुन्तलाको रुखको छाँयामा म र उजेली र झुपी थियौं । ‘छि † काठाको नाख कत्रो वाई ।’ मेरो नाकलाई लक्षित गर्दै झुपीले भनी । तर, परिवेश नाकसँग मिल्ने थिएन । गाउँमा छँदा यस्ता झाम्रेहरू धेरै बिते गाउनुभन्दा अरूमा नै ।
चिसोले निकै हान्न थालेपछि गाँजाले सालको सुल्फामा बेरिएर हामीलाई तताएको थियो । उजेली पनि सँगै थिई, फर्कायौं । स्वस्थानीमा महादेव र पार्वती झैं झुपीको पोल्टामा त्यो रात कटाइदिएँ । त्यो साढे एघार ........हातको चिमचिमे घडिमा बजिरहेको थियो । दिनभरिको मेलापातले थकित उसको शरीर, काखीबाट पसिनाको अमिलो गन्घ । मिड्डीको फेरमा म निदाएँ । अलिकति रिसाएकी थिई अर्कोदिन । दुःखको कुरा त्यो दिनदेखि आजसम्म भेट भएको छैन उनीहरूसँग ।
त्यसो त प्रेम गर्ने चलन गाउँमा परिवर्तन आएको छ । हामी वन पाखामा, रोपाइँ र पानी पँधेरोमा प्रेम साट्थ्यौं । तर मोटर र मोवाइलले धेरैको सम्बन्ध जुराइदिएको छ । एउटा जोक्स सम्झिन्छु, ‘सुहागरात’को । गाउँमै बाख्रा चराउँदा गरेका कामहरू ।
पाँच दशक पछिको भिन्नताले तिरमिराउँछन् आँखा । जीवनशैलीमा परिवर्तन आएको छ । प्रविधिको प्रयोगले यान्त्रिक बन्दैछ मानिस । म सम्झिर्दै छु आफ्नै परिवर्तित परिवेश । एस.एल.सी पछिको मेरो सहर बसाइँ । त्यसो त एक दशक विदेशमा विताइएछ । र, कम्प्यूटर इन्जिनियरको मेरो पेसा आफै पनि यन्त्रिक भइसकेको अनुभव गर्छु ।
धेरै समयपछि फेसबुकमा झुपीको सम्झनामा केही शब्द चढाएँ ‘झुपि र झाम्रे’ । ऊ हेर्छे हेर्दिन थाहा छैन । सायद सुदूर गाउँमा त्यो पहुँच छैन । हेर्न पाएको भए साढे एघार.....ऊ फेरी सम्झिन्थी होली, मैलेजस्तै घरीघरी । एउटा मीठो पहिलो अनुभव बिर्सिन चाहेर पनि त कोही सक्दैन ।
केही झकाएका छन् आँखाहरू । पानीको सटेज छ कोक पिइदिन्छु । यो सहरिया जीवनको बाध्यता । मोबाइल बज्छ । समय बिताउने अजीव साधन, बोर लायो कि थिचिदियो । ठिटीहरूको प¥यो भने घण्टौं गफिन्छ ।
‘शलिना’ मेरी पार्टटाइम गर्ल फ्रेण्ड, यसरी नै भेटेको थिएँ । उनीसँगका क्षणहरू सम्झिन चाहन्न किनकि हामी एक महिनामा नै डिभोर्स गरिदियौं । बालै भएन ! आउने जाने त क्रम चलिरहन्छ । उनीबाट जन्मेको छोरा अहिले दोस्रो बाउसँग रम्दै छ । हप्ताअघि पार्टीमा भेट भएको । बियरको चुस्कीसँगै पूर्व छोरासँग निकै रमाइलो भएथ्यो । म यी सब बिर्सन चाहन्छु ।
‘तपाइँ को बोल्नु भो’, मेरो प्रश्न खस्न नपाउँदै उल्टै म त्यो नारी स्वरको जवाफ दिनु पर्ने फसादमा परें । म अलमलिएँ । ‘अलमलिनु भो हैन ?’ नारी स्वरले सोध्यो । म केही बोल्न सकिन । ‘रातिराति केटीहरूलाई फोन गर्न लाज लाग्दैन ?’ मलाई भाउन्ना छुट्यो । उनको अन्तिम प्रहार, ‘तपाइँलाई रातिमा यसरी केटीहरूसँग फोन गर्न मजा आउँछ होइन ?’ म नाजवाफ भएँ । हातबाट मोबाइल सेट खस्ला जस्तो भयो र शरीरमा चिटचिट पसिना आयो ।
करिब पन्ध्र मिनेटपछि त्यहीँ नम्बरबाट म्यासेज आयो ‘तपाइँलाई गुड नाइट नभनी म कसरी सुत्न सक्छु र ?’ मैले तत्कालै डायल गरें । उनी प्रमिला थिइन् । प्रमोदकी पे्रमिका । मेरो कलेजकी छात्रा । भर्खर ‘ए’ लेभल सकेर आएकी थिई ।
प्रमोद मेरो कलेजको धुरन्धर पढन्दास । उमेरले मभन्दा निकै कान्छो थियो । मध्यपश्चिमको होनाहार ठिटो, बाकपटुक । ठिटीहरू लठ्ठै हुन्थे उसको बोलिमा । यो जोडीसँग कहिले रङ्गमञ्च त कहिले रङ्गशालामा भेट हुन्थ्यो । कुराकानीकै शिलशिलामा भेटको प्रस्ताव त उनैले राखिन् । मलाई केही सहज भयो । म उनलाई मन पराउँथे । रत्नपार्क छेउको चिया पसलमा एक दिन उनलाई भेटें । त्यो दिन उनीसँग वन साइडेड लवको बारेमा कुरा गरें । उसले पूरै इन्कारेकी थिई ।
आज रातको फोनले मलाई तनाब दियो । बिगत दुई वर्षदेखि ऊ कसैलाई पे्रम गर्छे । घोरिएर सोँचें । उसका पनि त रहर र इच्छाहरू पानीका फोका झैं उठ्दै र फुट्दै गर्छन् होला । सायद ऊ प्रमोदसँग सन्तुष्ट छैन, एउटा जवान केटी । प्रमोद भद्रमान्छे हो । उसको एउटै कमजोरी छ । कसैसँग जीवनसाथीको रूपमा प्रेम गर्छ भने बिहे अगाडि उसलाई पुजिरहन्छ । वास्तवमै आदर्श प्रेमी । पहिलो दिन फोनमै एउटा टुटेफुटे कविता सुनाइदिएँ । त्यसपछिका दिनहरू फोनमै घण्टौं बितिदिन्थे । रातका फोनका बातले मेरो एक्लोपन केही सुन्दर बनाइदिन्थ्यो । खुलेर यौनका कुरा हुन्थे । म तपाइँलाई सोधुँ ? तपाइँ खुलेर नेपालीमा आफ्ना अङ्गका नाम भन्न सक्नुहुन्छ ? फोनले यसलाई सहज बनाइदियो म सोधिदिन्थे ।
‘तिमीले कहिल्यै अनुभव गरेकी छौं ?’
‘छि ! कस्तो लाज नभा’को ।’
‘मन लाग्दैन ?’
‘लागेर के गर्नु ....केटाहरूलाईजस्तो सजिलो छर ?’
‘तिमी कसैलाई प्रेम गर्छेउ ?’
‘तपाइँ नै मेरो पहिलो र अन्तिम प्रेमी ।’
उसको स्वरमा कताकता आँसु भिजेको पाउँछु । विगतका केही घटनाले ऊ प्रमोदसँग प्रेम गर्थीर्, मेरो विश्वास दरियो । उनीहरू सँगै रात बिताउँथे । मेरीस्टोप सेन्टरमा उनीहरूले एवर्सन गरेका थिए, मेरै साथीको क्लिनिकमा । म केही सोच्न सक्दिन । प्रमोद आखिर त्यस्तो थिएन । उसले प्रमिलालाई प्रेम गथ्र्यो त्यसैले सहयोग मात्र गरेको हुनसक्छ । ‘तपाइँ नै मेरो पहिलो र अन्तिम प्रेमी ।’ प्रमिलाको अन्तिम वाक्यले रत्नपार्कमा रातको समयमा भेटीएकी एक ठिटीले भनेको आई.एम भर्जिन ब्रो सम्झाइदिन्छ ।
समय बितेको पनि पत्तै नहुने । आज म र प्रमिलासँगै बस्न थालेको एक दशक पुगिसकेछ । यो समयमा हामीबाट एउटी छोरी जन्मिएकी छ । छोरी आजभोलि होस्टेलमै छे । उसको उच्च शिक्षासम्मको डोनेसन भरिसकेका छौं । सायदै अब ऊ फर्किन्छ । आजको रात म धेरै व्यस्त छु । कारण भोलि नै प्रमिला र मेरो डिभोर्स पार्टी छ । उनी भोलि नै अर्कैसँग विवाह बन्धनमा बाँधिदै छिन् । मैले पनि वृद्धा आश्रमको लागि अग्रीम बुकिङ फर्म बुझाउँदै छु । बाँकी जीवन अबको केही दशक म ‘रोबोर्ट’ मेरी नयाँ यान्त्रिक जीवन सङ्गिनीसँग बिताउँदै छु । भोलि नै हाम्रो इन्गेजमेन्ट हुँदैछ । रातको ठीक साढे एघार बजे ।